Tilmaamaha Safarka Alanya Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidada - Hotels Friendly Hotels
Tilmaamaha Safarka Alanya Xalaal
Alanya waxay ku taal Pamphylia, Turkey, oo ku taal xeebta koonfureed. Waa goob dalxiis caan ah.
Diyaarad ahaan: Alanya waa safar 2 saacadood ka imanaya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Antalya (AYT). Inta badan dalxiisayaashu halkaas ayey ka degaan oo waxaa basas loogu raraa hudheelkooda ku yaal Alanya. Waxa kale oo jira madaarka yar ee Gazipaşa, oo ka dhaw laakiin marar dhif ah ayay leedahay duulimaadyo caalami ah.
Tareenka: xarunta ugu dhow waa Konya, oo leh tareenada xawaaraha sare ku socda ee YHT ee ka socda Istanbul Pendik iyo Ankara. Kuwaas waxaa lagu arkaa isku xirka basaska Antalya iyo Alanya, oo qaata qiyaastii lix saacadood.
Dhinaca badda: xagaaga, doomo bisad-dhaqso ah oo ay maamusho Akgunlerdenizcilik ayaa mara inta u dhexeysa Alanya iyo Kyrenia ("Girne") Waqooyiga Qubrus. Waxay ka socotaa Alanya Khamiis & Sun duhurkii, laga bilaabo Kyrenia Wed & Sat 10:00. Tani waa catamaran baska badda Rakaabka cagaha oo qaata qiyaastii 2 saacadood 30.
Sidee looga warwareegaa Alanya
Socodka ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican Bartamaha magaalada ee mashquulka badan.
Wax kasta oo dhaafsiisan socod macquul ah (masaafada, shandadaha, kuleylka), waxaa hubaal ah in dolmuş kuu socon doono. Ku sug boosteejada baska, ama calan ku dhig meel kasta. Ereyga "dolmuş" macno ahaan waxaa loola jeedaa "cufan" waxayna ujeedadoodu tahay inay ku noolaadaan tan. Filo inaad bixiso qiyaastii 2 TL qofkiiba markii lagu raaco magaalada.
Sidoo kale waad kireysan kartaa mooto koronto ama baaskiil.
Alanya Tilmaamaha Dalxiiska
Citadel (Kale). waxay ku taal jasiirad buuro leh oo ku wareegsan badda saddex dhinac, iyo qaybaha casriga ah ee magaalada dhinaca kale. In kastoo calaamadaha muujinaya dariiqa loo maro 'Castle' (Kale) waxay tilmaamaysaa qaybaha ugu sarreeya ee derbiyada, darbiyada waa la raaci karaa iyagoo ka bilaabmaya midigta heerka badda. Gaar ahaan xiisaha (ama ku xigta) qalcadda waa cirifka gacanka oo ay sameysay dheereyn dheeri ah oo cidhiidhi ah, muddo dheerna badda ku garaacaya. Qaab dhismeedkan ayaa loogu magac daray Adam Atacağı af Turki ah (waxaa loogu dhawaaqaa) aa-daam aa-taa-jaa-a), macno ahaan "nin tuuraya", maadaama halkan ay ahayd meeshii dadka xukunka dilka lagu xukumay lagu riixay badda. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Daarta Cas (Kızıl Kule). Taawarka laba-geesoodka ah ee qalcadda oo ugu dhow badda. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Markab Hore (deked markab). Waxaa dhisay Seljuqs, qaab-dhismeedkani wuxuu dib u bilaabmay 1228. Wuxuu ku yaal meel aad ugu dhow Daarta Cas. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Qadiimiga ah ee Alanya. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Godka Damlataş (dhow Kleopatra Beach). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
boholaha hareeraha magaalada, oo laga heli karo safarada doonta.
Dim Stream. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sapadere Kanyonu. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waxa lagu sameeyo Alanya
Waxyaabo badan ayaa laga sameeyaa Alanya waxaana jira shirkado dalxiis oo badan oo si qalbi furan oo doonaya inay ku caawiyaan kuu caawiyaan.
Safarka doomaha (isku day inaad hoos u dhigto € 5 hal saac), waa inaad ku dartaa booqashooyinka godadka (haddii cimiladu saamaxdo) iyo qado iyo sidoo kale animation leh muusikada Eurodance
Quusitaanka qulqulka (kalluun badan inta lagu jiro xilliga sare)
Safarada Jeep safari
Safarada Baaskiilka Bawdada
Safar ku taga goobta amphitheater-ka taariikhiga ah ee Aspendos
Safarka Dim Çayı
U adeegidda dhammaan dalxiisayaasha yurubiyanka, ku dhowaad qof kasta oo Alanya ku nool wuu aqbalaa yuuro. Xitaa laga yaabee inaadan ku beddelin euro-gaaga gabi ahaanba. Markaad lacag ka qaadanayso mashiinnada si toos ah u sheega, hubi inay ku siin karaan euro iyo sidoo kale lira. Sidoo kale waa wax aad u fudud in la isweydaarsado dhammaan taajyada Scandinavian-ka (krona, kron, laga yaabee marka laga reebo Icelandic krona) xafiisyo badan oo sarrifka magaalada ah - oo aan wax caadi ah ka ahayn Turkiga intiisa kale - maaddaama qaar badan oo fasax sameeya Alanya yihiin Scandinavians.
Alanya way ka buuxsan tahay illaa dhammaadka dukaamada, kuwaas oo noqnoqda mid soo noqnoqda maaddaama dhammaantood ay si qurux badan u iibiyaan isla alaab isku mid ah. Dukaammada ayaa si xishood la’aan ah u iibiya noocyo iyo badeecado been abuur ah, oo ah halka ay ku eg tahay waqtiga uu dhacayo. Liiska waxyaabaha ugu caansan:
Dharka: kabo iyo funaanado ka yimid Puma, iwm (been abuur dabcan!)
Ilaalada: Wax walba oo ka socda Seiko illaa DKNY (dabcan waa been abuur!)
Boorsooyin iyo boorsooyin
Qalabka shaaha ee Turkiga
Tuubooyinka biyaha iyo tubaakada
Diyaar u noqo inaad jabiso, milkiilayaasha dukaanku way filayaan. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad ogaato qiimaha ku dhow alaabada aad jeclaan lahayd inaad iibsato. Waad ku hubin kartaa qiimaha midkood adoo horay u sii baaraya khadka tooska ah ama weydiinaya qof kasta oo deegaanka ah oo saaxiibtinimo leh. Markaad jabiso, waxay ku siin doonaan qiimo aan macquul ahayn oo sarreeya. Taas macnaheedu waxa weeye waxaad bixin kartaa labo Euro oo aad isku dayi kartaa inaad ku kulanto meel qiimaha aad go'aansatay inuu noqdo kan ugu sarreeya. Sida iska cad, kuma xadidan kartid supermarket, kaalimaha shidaalka, iwm. Isku dayida inaad jabsato alaabada guud ahaan waa laga xumaaday. Waxaad u baahan tahay inaad dhex gasho baararka is biirsaday ee safka ku jira marinka xeebta, haddii aadan rabin inaad bixiso wax ka badan cuntada iyo cabbitaannada ka badan Yurub. Makhaayado / baarar fara badan / IWM xitaa kuma jiraan qiimeyaal menu-yadooda.
Cuntada Turkiga guud ahaan runtii waa dhadhan fiican. Isku day:
Lahmacun: Kuwani waxay kugu kici doonaan qiyaastii 5 TL waxayna u eg yihiin cunto fudud oo ka badan cuntada
Baklava: turkiga macaan. Qiimuhu wuxuu kuxiranyahay culeyska (tusaale 25-50 TL kiilogaraam)
Haddii aad ku jirto hudheel "loo wada dhan yahay" (taas oo inta badan dhacda), dhammaan cuntadaada waxaa bixiya hoteelka.
Halkee laga joogaa Alanya
Xirmooyinka fasaxyada badan ee raqiiska ah, oo badanaa ka yimaada Jarmalka ama Iskandaneefiyanka, waxaa ku jira hudheelo "loo dhan yahay" oo ku yaal xeebta qayb ka mid ah heshiiska. Tusaale ahaan, “dhammaan loo wada dhan yahay” 4-xiddig hudheel ah oo ku yaal Alanya oo ay ku jiraan duulimaadka aadaya Antalya oo ka socda Jarmalka ayaa ku kacaya € 400.
Villa Casara, Konakli, Alanya. Cusub cusub oo qurux badan (laga bilaabo 2015) villa turkiga, oo 8 si raaxo leh u seexda, waa mid dhalaalaya, waasac ah oo raaxo leh dhamaan aaladaha casriga ah. Waxaa lagu dejiyay jardiinooyin qurux badan oo timireed leh iyo 3 balakoonno oo lagu raaxeysto aragtida buuraha, barkadda dabaasha iyo muuqaalka tooska ah ee badda.
Yasmiin Hotel, Kerekerhane Mh. Kerekerhane,. Huteel yar oo 3 xiddig leh oo kuyaala badhtamaha magaalada Alanya. € 50 / habeenkii. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Xagee looga socdaa Alanya
Galbeedka, Pamphylia inteeda kale waxay bixisaa meelo badan oo xiiso leh.
Dhanka bari, Anamur, Silifke, iyo inta kale ee bariga badda Mediterranean (xeebta Cilician: Cilician Mountains, Cilician Plains, iyo Hatay) waxay ku sugeysaa dhul cidhiidhi ah oo cidhiidhi ah.
Qubrus, oo jiifa koonfur-bari, sidoo kale waa ikhtiyaar kale. Inta lagu jiro xilliga sare (Maajo ilaa Sebtembar), waxaad doon ku tagi kartaa Kyrenia ee Waqooyiga Qubrus. Waxay qaadataa qiyaastii 3½ saacadood waxayna ku kacaysaa USD30 / qof hal dhinac ah ama USD50 / qof soo noqosho ah. Ka baxsan xilliga sare, dekedda caalamiga ah way xiran tahay.
Damlatas Guryo Qurxoon Alanya
Hoteelka Galeri Resort
Dalxiiska Long Beach & Spa Alanya
Naadiga Maritim Hotel Alantur Alanya
Hoteelka Stella Beach Alanya
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Turkiga > Tilmaamaha Safarka Alanya Xalaal
Mercure Edinburgh City - Wadada Princes	  